Sun, Oct 17, 2021 | 09:28:36 NST
Posted: Wednesday, Apr 18, 2018 19:59 PM (3years ago )
अमेरिकी गुप्तचर निकाय सीआईएका निर्देशक माइक पोम्पियो सुटुक्क उत्तर कोरियाको भ्रमणमा गए । उनले उत्तर कोरियाली सर्वोच्च नेता किम जोङ उनलाई भेटे ।
अमेरिकी मिडियामा आएका समाचार अनुसार सीआईएका निर्देशक पोम्पियो इस्टर पर्वका बेला मार्च ३१ तथा अप्रिल १ मा उत्तर कोरियाको गोप्य भ्रमणमा गएका थिए ।
पोम्पियोको उत्तर कोरियाको भ्रमणको मुख्य उद्धेश्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तथा किम जोङ उनसँगको सीधा कुराकानीको वातावरण तयार पार्नु रहेको बताइएको छ ।
यसभन्दा पहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उत्तर कोरियासँगको वार्तालाई उच्चस्तरीय वार्ताको संज्ञा दिएका थिए ।
के कुरा भयो गोप्य वार्तामा ?
वाशिंगटन पोस्टका अनुसार माइक पोम्पियोको उत्तर कोरिया भ्रमण रेक्स टिलरसनको राजीनामा तथा सीआईए प्रमुखबाट विदेश मन्त्री बनेलगत्तै भएको थियो । अखबारका अनुसार तत्कालीन अमेरिकी विदेश मन्त्री मेडलिन अल्ब्राइटले सन् २००० मा किम जोङ इललाई भेट्न उत्तर कोरियाको भ्रमण गरेका थिए । यसपछि दुई देशबीचमा उच्च स्तरको सम्पर्क भएको छैन ।
वाशिंगटन पोस्टले सीआईए, ह्वाइट हाउस तथा संयुक्त राष्ट्र संघमा रहेका उत्तर कोरियाका प्रतिनिधिसँग पोम्पियोको भ्रमणको आधिकारिकता मागे पनि उनीहरुले यसको पुष्टि गर्न मानेनन् । पछि रोयटर्सले आफ्नो गोप्य स्रोतमाफर्त यो सूचनाको पुष्टि गरेको थियो ।
कसरी भयो अमेरिका र उत्तर कोरियाबीच सम्पर्क ?
उत्तर कोरिया र अमेरिकाबीच कुनै कुटनैतिक सम्बन्ध कायम छैन । तर अमेरिकी गुप्तचर निकायका अधिकारीको उत्तर कोरिया भ्रमण भने यो पहिलो पल्ट भएको होइन । यसअघि पनि दुवै देशको तर्फबाट केही प्रतिनिधि तथा कुटनैतिक अधिकारीहरुको भ्रमण भएको छ ।
यसअघि सन् २०१४ मा नेसनल इन्टेलिजेन्स एजेन्सीका निर्देशक जेम्स क्लेपर उत्तर कोरियाली जेलमा रहेका दुई अमेरिकी नागरिकलाई छुटाउने पहल गर्न उत्तर कोरियाको भ्रमणमा गएका थिए । तर पनि दुवै देशबीच सम्पर्क मुख्य रुपमा अनाधिकृत च्यानल तथा मध्यस्थकर्ताको माध्यमबाट हुने गरेको छ ।
कहिले र कहाँ हुनेछ ट्रम्प र किमबीच वार्ता ?
पछिल्लो महिना नै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अप्रत्याशित रुपमा उत्तर कोरियाले गरेको वार्ता प्रस्ताव स्वीकारेका थिए । योभन्दा पहिले उत्तर कोरिया र अमेरिकाका राष्ट्रपतिबीच आधिकारिक भेट भएको छैन । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले जुन वा त्योभन्दा पहिले उत्तर कोरियासँग वार्ता हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताएका थिए ।
उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनसँग अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको भेटवार्तालाई लिएर जापान चिन्तित रहेको खबर सार्वजनिक भएको छ । जापानी प्रधानमन्त्री शिन्जो आबे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसँग कुराकानी गर्न अमेरिका गएका छन् ।
फ्लोरिडामा रहेको आफ्नोे मार–ए–लागो–रिसोर्ट ट्रम्पले आबेलाई आमन्त्रित पनि गरेका छन् । त्यहाँ दुई नेताले गल्फ खेल्ने योजना बनाएका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले उत्तर कोरिया मामिलामा जापान र अमेरिकाबीच कुनै मतभेद नरहेको बताए ।